‘चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठुलो दुर्घटना ल्याउनेछ’ : डा. भट्टराई « News of Nepal
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठुलो दुर्घटना ल्याउने बताएका छन् । उनले आइतबार ट्वीटमार्फत् यस्तो बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘पहिरो मर्मत नगरी चुनावको गाडी कुदाउने रहरले झन् ठुलो दुर्घटना ल्याउनेछ।’